Barcelona oo guul gaartay iyo Realmadrid oo la garaacay
Home Sports Barcelona oo guul gaartay iyo Realmadrid oo la garaacay
Xiddiga kooxda Barcelona ayaa sii dheereystay rikoorkiisa goolasha sannadka 2012 isagoo ka dhigtay 88 gool ka dib markii uu labo gool oo uu dhaliyay ay Barcelona 2-0 kaga badisay kooxda heerka labaad ee Cordoba wareega 16ka ee Copa del Rey.
Barcelona ayaana haatan hal lug la sii gashay wareega 8da ee koobka ay difaacanayaan ee Copa del Rey madaama Corodaba ay soo booqan doonto lugta labaad garoonka Camp Nou.
Real Madrid, oo 2011kii qaaday koobkaan ayaa waxa ay guuldarro 2-1 ka soo gaartay kooxda La Liga ka ciyaartay ee Celta Vigo lugta hore ee wareega 16ka ee Copa del Rey.
Labada gool waa ay ku hormareen kooxda Celta Vigo iyadoo Ronaldo uu hal gool u soo celiyay kooxda Los Blancos, oo Celta Vigo lugta labaad isbuuca soo socda ku soo dhaweyn doonta Bernabeu.
Kooxda Athletic Bilbao ayaa waxaa tartanka Copa del Rey ka saartay kooxda deriskooda ee heerka seddexaad ee Eibar, iyagoo ku haray sharciga goolasha martida waxaana uu ahaa kulankaan lugta labaad ee wareega 32da oo hore u baaqday.
Dhanka kale kooxda Atletico Madrid ayaa hal lug la gashay wareega 8da ka dib markii ay 3-0 kaga badiyeen kooxda ay isku magaalada yihiin Getafe.